बालुवाटारको जग्गा, होली वाइन, वाइडबडीदेखि एमसीसीसम्म ,काण्डै काण्डको सरकार …हेर्नुहोस!::Point Nepal
बालुवाटारको जग्गा, होली वाइन, वाइडबडीदेखि एमसीसीसम्म ,काण्डै काण्डको सरकार …हेर्नुहोस!
काठमाडौं : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पूरा भयो । २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका ओलीले स,म्मृद्धिको भाषण धेरै पटक धेरैलाई सुनाएका थिए ।‘पानीजहाज र रेल’, ‘हरेक भान्साको चुल्होमा ग्यास पाइप जडान’ जस्ता योजना ओलीका महत्वाकांक्षी योजना थिए । ती ‘सपना’ भाषणमा त सुनिए । तर सरकारबाटै पहलकदमी खासै भएन । बरु केही त्यस्ता वि,वादित घ,टना भए, जसले सरकारको छवि नै धमिल्यायो ।प्रधानमन्त्रीले भने गल्ती सच्याउनुको सट्टा भा,षणबाटै ढा,कछोप गर्न धेरै समय खर्चिए ।
यही शुक्रबार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रस्तुत छ ओली सरकारका केही चर्चित काण्ड :३३ किलो सुनका,ण्डका चर्चित पात्र हुन् चुडामणी उप्रेती उर्फ गोरे । मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको ह,त्यापछि सार्वजनिक भएको सुन प्र,करणले देश तात्यो ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो प,रिमाणमा त,स्करीको सुन भने सहजै भित्रिने तथ्य यो घ,टना गर्यो । सुन तस्करीका एक नाइके मानिएका गोरेले अ,दालत समक्ष आ,त्मसमर्पण गरे । गोरे अहिले जे,लमा छन् । तर सुन त,स्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइए पनि ती को हुन् अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
दोस्रो पटक ओली सरकार गठन भएलगत्तै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अ,न्त्य गर्ने घो,षणा गरियो । गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट संस्थागत रुपमै अ,न्त्यका लागि पहल पनि नगरेको होइन । विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खा,रेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दियो । यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरियो । केही समय वाहवाही पाएको सरकारले सिण्डिकेट अभियान अगाडि बढाउन सकेन ।१७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ‘अ,पहरण शैली’मा नियन्त्रणमा लिइयो ।
प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै बालुवाटार पुर्याइयो । उनलाई प्लेन छुटेपछि मात्रै घर जान दिइएको थियो ।मेलम्ची खानेपानी प्र,करण पुरानै हो । तर हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं ल्याउने भन्दै प्रचार गर्दैआएका थिए ।यसबाट प्रधानमन्त्री ओली पनि अछुतो भने रहेनन् । १९९८ मा सुरु मेलम्ची खानेपानी १७ करोड लिटर दैनिक काठमाडौंमा भित्र्याउने लक्ष्य थियो । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि दसैंको भाका राखेर काठमाडौंमा पानी आउने बाचा गरियो । तर मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अझै आउन सकेको छैन । अहिले पनि असारसम्ममा काठमाडौं आइपुग्ने प्रचार गरिएको छ ।
अर्को चर्चित का,ण्ड हो नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिदको अनियमितता । २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घो,टाला भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । २ अर्ब ४० करोड कमिशन पनि गायब भएको पनि बताइएको थियो । त्यसमा बि,चौलियाका ना,टकीय कम्पनी खोलिएका थिए ।त्यसको म्याक्सिमम टेक (अफ वेट (एमटीओडब्लु) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको पनि नाम जोडिएपछि वाइबडी प्र,करण अहिले सामसुम जस्तै छ ।
नेपाल ट्रष्टको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने यति होल्डिङ्सलाई सुम्पिएपछि सरकारको चौतर्फी आ,लोचन हुँदैआएको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो ।त्यस्तै पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा ८० वर्षसम्म यतिलाई निशुल्क दिइएको छ । सरकारको यतिसँग सती गएको भन्दै चर्को आ,लोचना भइरहँदा पनि सरकार मौन छ ।अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे नेकपाभित्रै चर्को विवाद छ ।
प्रभावशाली नेताहरु नै दुई धारमा उभिएका छन् । सरकार एमसीसी जतिसक्दो चाँडै संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।तर चर्को वि,वादका का,रण अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । ठूलो तप्का एमसीसी नेपालमा लागू गर्न नहुने पक्षमा छ तर सरकारलाई पास गर्न हतार छ ।बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्र,करणमा अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दा,यर गरेको मु,द्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई साथै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जोगाएपछि चौतर्फी आ,लोचना भयो ।
कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका विजयकुमार गच्छदार भने यस मु,द्दामा मुछिए । गच्छदारलाई मु,द्दा दायर गरेर अरुमाथि प्रश्न नउठाएपछि ओली सरकारले यो,जनावद्ध रुपमै पूर्वाग्रह साँधेको व्याख्या कांग्रेसको छ ।कांग्रेसका कार्यकर्ताले त आ,न्दोलन नै गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र विष्णु पौडेलका छोरामाथि पनि का,रावही हुनुपर्ने भन्दै आ,न्दोलन हुँदैआएको छ ।उखु किसानले भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौं आएर धर्ना बसे । घर खेत नै धितो राखी ऋ,ण झिकेर खेती गरेका उनीहरुले व्यवसायीबाट भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौंको माइतीघरमा आएर आ,न्दोलन गरे ।
सरकारले चिनी उद्योगलाई बोलाएर छलफल गरेपछि माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिने सहमति भयो । तर अहिलेसम्म किसानले आधाभन्दा धेरै पैसा पाएका छैनन् । सरकारको उधारो सहमतिले किसान मारमा छन् ।तारागाउँ विकास समितिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा भाडा र सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता भएको थियो । साथै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सरकारी सेयर पनि व्यक्तिको नाममा गएको खुलेको हो ।सरकारी कागजात किर्ते गरेर सञ्चालकहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले ३९ प्रतिशत सरकारी सेयर घटाएर ९ प्रतिशतमा झारे ।
उक्त समूहले सेयर क,ब्जा गर्दै गएपछि होटलबारे सरकारले चासो त देखायो । सरकारले तत्कालिन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य (हाल सभामुख) अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले अहिलेसम्म गुपचुप राखिदियो ।सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको गुठी विधेयक सम्भवतः सरकारको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अलोकप्रिय वि,धेयक थियो । चौतर्फी आ,न्दोलन र वि,रोध भएपछि सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गु,ठी विधेयक फिर्ता नै लिनु पर्यो ।सरकारले विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै अडान लिए पनि जनस्तरबाटै आ,न्दोलन च,र्किन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।अन्नपूर्ण बाट